dhizaini: yakanakisa kutenga inopa zvakakosha kuderedzwa pane akasiyana maapuro wachi akateedzana 2 mamodheru
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Zvakanakisisa Kutenga zvinopa zvakakosha kuderedzwa pamhando dzakasiyana dzeApple Watch Series 2
Kunyangwe Apple yakatotanga iyo Tarisai Series 3 , mutsara wayo wekare wemawatchwatches uchiri kutengesa chaizvo, kunyanya kuti vatengesi vazhinji vava kudzikisira zvishandiso zvinopfeka kuti vawane nzvimbo yemamodeli matsva.
Best Buy iri kuita kusimudzira kunonakidza paApple Watch Series 2 Sport uye Nike +, saka kana iwe uchifunga kubhadharisa wachi zuva nezuva chinhu chaungade kuita, saka, nenzira dzese, unogona kuenda kumberi uye utenge imwe padivi rakachipa.
Kune anopfuura gumi Apple Yekuteedzana 2 mhando dziri kutengeswa ku Best Buy, uye kunyangwe ivo & apos; dzichiwanika pamitengo yakasiyana, ivo vanodzikiswa nemari yakafanana: $ 70.
Pakati pezvakachipa kwazvo, Apple Watch Series 2 38mm modhi inowanikwa muSpace Grey, Goridhe, uye Sirivheri chete $ 229 (pasi kubva $ 299). Iyo 42mm modhi iri $ 70 yakachipa zvakare, saka vatengi vanogona kutenga imwe chete ye $ 259 (pasi kubva $ 329).
Mimwe yemhando idzi dzeApple Watch Series 2 dziripo mubhokisi rakavhurika yemitengo yakaderera, asi iwe haugone kuchengetedza zvakadaro kukoshesesa dambudziko. Ita shuwa yekutarisa Yakanakisisa Kutenga & apos; s online chitoro kune izere runyorwa rweanodzikiswa smartwatches.
samsung giya mutambo bhatiri kupera
samsung level bhokisi mini wongororo
Samsung & apos; s ichangoburwa Android 6.0 Marshmallow yekuvandudza purogiramu yekubuda: Cherechedzo 5 muna Zvita, S6 muna Ndira, S4 haina-kuenda
LG G3 mutengo uye zuva rekuburitsa: hezvino zvatinoziva kusvika zvino